Nin qaraxyo tiro-beelay & dilal ka geystay Muqdisho oo Xukun adag lagu riday
Wednesday July 29, 2020 - 22:12:25 in Wararka by Editor Caynaba News
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ayaa xukun dil ku riday Isxaaq Keerow Aadan Cali oo loo yaqaan (C/ladhiif iyo Cumar Faaruuq)
ka dib markii lagu helay inuu ka tirsanaa Al-shabaab, isla markaana uu geystay qaraxyo iyo dilal khaarijin ah sida uu ku dhawaaqay Guddoomyaha Maxkamadda Col. Xasan Cali Nuur (Shuute).
Isxaaq Keerow ayaa bishii Janaayo ee sanadkan 2020 ku dilay magaalada Muqdisho Marxuum Axmed Cumar Calasow, isagoo sidoo kale fuliyay 10 weerar oo qaraxyo Bam Gacmeed ah oo qaarkood ay sababeen dhimasho iyo dhaawac.
Ninkan ayaa lagu qabtay weerar Bam oo uu ku qaaday xarunta Laanta Horseeed ee degmada Yaaqshiid bishii May ee sanadkan iyadoo qaraxaasi uu ku dhintay marxuum Faarax Cabdulle Cariif oo ka tirsanaa ciidamada dowladda.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ayaa xukun dil toogasho ah ku riday eedeysane Isxaaq Keerow Aadan Cali oo loo yaqaan (C/ladhiif iyo Cumar Faaruuq) oo lagu helay inuu ka tirsanaa Alshabaab, isla markaana uu geysay dilal khaarijin ah iyo qaraxyo.
Isxaaq Keerow wuxuu bishii Janaayo ee sanadkan 2020 ku dilay magaalada Muqdisho Marxuum Axmed Cumar Calasow, isagoo ka mid ahaa koox fal dil ah fulisay, laakiin wuxuu sidoo kale fuliyay 10 weerar oo qaraxyo Bam Gacmeed ah oo 9 ka mida ay qarxeen.
Eedeysanaha waxaa lagu soo qabtay weerar Bam oo uu ku qaaday Laanta Horseeed ee degmada Yaaqshiid bishii May 2020, iyadoo qaraxaasi uu ku dhintay marxuum Faarax Cabdulle Cariif oo ka tirsanaa ciidamada dowladda.